IYunivesithi yaseSyrase: I-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO WESIKOLO
Izibalo zobungeniso kwiNyuvesi yaseSyrause
Funda malunga neSyracuse kunye ne-GPA, izikolo ze-SAT, kunye ne-ACT Scores Uyakuyifuna
ISyunivesithi yaseSyrause, ngenani lokumkela le-48%, liyakwamkelwa okukhethiweyo. Uzakufuna amabakala anamandla kunye nangaphezulu kwe-SAT okanye ii-ACT izikolo ukuba ube ngumfaki-sicelo okhuphisanayo. Inkqubo yesicelo iphelele kwaye iquka isicatshulwa soLuntu oluqhelekileyo, iileta ezimbini zinconywa, kunye nolwazi malunga nemisebenzi yakho yangaphandle. Ezinye iinkqubo zifuna iphothifoliyo okanye uphando.
Kutheni Unokukhetha IYunivesithi yeSyracuse
Kukho kwingingqi yeFinger Lakes ephakathi kweNew York, iYyunivesithi yaseSyrafu yenzele igama kuzo zombini izifundo kunye nezemidlalo. Iinkqubo kwizifundo zeendaba, ubugcisa kunye nezoshishino zifanelekile ukujonga, ukubiza nje ezimbalwa. Amandla ekwiyunivesithi kwezobugcisa kunye neenzululwazi zanikezela isahluko sePhi Beta Kappa . I-Syracuse Orange incintiswano kwiCandelo le-NCAA I- Nkomfa ye-Atlantic Coast . I- campus ekhangayo yindlu ye-33,000 isihlalo seKharrier Dome, inkulu yekholeji kwibala leli lizwe.
I-Syracuse GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
ISyunivesithi ye-Yunivesithi yase-Syracuse, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Okwazisa ukuba wamkelwe. Jonga i-graph-time real and count your chances of entry in this tool free from Cappex. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ingxoxo yeSingqinisiso seMigangatho ye-Admissions
Phantse isiqingatha sabafake izicelo kwiYunivesithi yaseSyrafus abayifumene. Abafakizicelo abaphumeleleyo baya kufuna amabala kunye neemvavanyo zokulinganisa ezilinganiselweyo ezingenani ubuncinane. Kwigrafu ngasentla, amachashaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye aluhlaza amelela abafundi abamkelekileyo. Abaninzi abavuma ukuba abafundi banomlinganiselo ophakamileyo wesikolo we "B" okanye ungcono, amanqaku ahlanganisiweyo we-SAT angama-1100 okanye ngaphezulu (RW + M), kunye nomlinganiselo we-ACT oyingxenye engama-22 okanye ngaphezulu. Ephakamileyo lawo mabakala kunye namanqaku, kulunge ithuba lakho lokufumana ileta yokuwamkela.
Qaphela ukuba kukho amachaphaza ambalwa obomvu (abafundi abatshitshisileyo) kunye namachashaza aphuzi (abafundi abadibeneyo) abafihliweyo emva kohlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka kuwo wonke igrafu. Abanye abafundi abanamabanga kunye namanqaku okuvavanya ayejoliswe kwiSirkusa awazange amkelwe. Qaphela kwakhona ukuba abafundi abambalwa bamkelwe ngamanqaku okuvavanya kunye namanqaku angaphantsi kwesiqhelo. Oku kungenxa yokuba ukuvunyelwa kwe-Syracuse kusekelwe kuninzi kwedatha.
Iyunivesithi isebenzisa i -Application Common and is admitted totally . I-Syracuse ithatha ingqwalasela ngokukhawuleza kwezifundo zakho zezikolo eziphakamileyo , i- essay yesicelo sakho, imisebenzi yangaphandle , kunye neencwadi zokucebisa . Abantu abamkelweyo bafuna abafundi abaya kuphumelela eklasini baze bafake isandla kwiqela le-campus kwiindlela ezinentsingiselo.
Izinga lokumkela iYunivesithi yeSyracuse: ama-52 ekhulwini
Uvavanyo lwe-Scores-25 / 75th Percentile
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 530/630
ISAT Math: 560/660
UMTHETHO WOMTHETHO: 25/29
UMTHETHO IsiNgesi: 24/31
UMTHETHO UMathe: 24/29
Olunye ulwazi lweYunivesithi yaseSyracuse
Indlela yeYunivesithi yaseSyrase ibe ne-tag ephezulu, kodwa malunga neyesibini kubathathu abafundi abafumana izibonelelo ezifumana inkxaso-mali evela kwunivesithi ukuze bancede ukuba ixabiso lilawulwe. Njengoko udala uluhlu lwekholeji yakho , qi ni sekise ukuba uthathe ingqalelo kwizinto ezifana nokuncedisa ngemali, iminikelo yemfundo, kunye nokugqweswa kunye nokugcinwa kwamazinga.
Ubhaliso lwabonke: 21,970 (i-15,218 izifundo zakudala)
Ukuphazamiseka kwesini: 46% Amadoda / 54% Abasetyhini
96% Ixesha elipheleleyo
Isifundo kunye neMali: i-$ 45,022
Iincwadi: $ 1,440
Igumbi neBhodi: $ 15,217
Ezinye iindleko: $ 1,665
Iindleko ezipheleleyo: $ 63,344
I-Yunivesithi yase-Syracuse yeNcedo lwezeMali (2015 - 16):
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana uncedo: 71%
Izibonelelo: $ 29,222
Imali: $ 9,322
I-Popular Majors: I- Accounting, i-Architecture, i-Biology, uLhwebo kunye noThengiso lobuGcisa, iMali, iNzululwazi yezoLwazi, ubudlelwane bamazwe ngamazwe, ukuThengisa, iNzululwazi yezopolitiko, i-Psychology, i-Radio kunye neThelevishini
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): 91%
Ireyithi yokuQiniswa kweNyaka-4: i-69%
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: 82%
Imidlalo Yabantu: Umkhondo kunye Nendawo, Ibhola, I-Cross Cross, I-Lacrosse, iNgcahla, Ukukhawula, iBhola lebhola
Ezemidlalo zaBasetyhini: Umkhondo kunye neNdawo, iLacrosse, ukuHlaba, iNgcahla, iHockey yeHlabathi, iSoftball, iTennis, iVolleyball
Ukuba Uthanda IYunivesithi yaseSyrause, Qinisekisa ukuba Hlola ezi Zikolo
Abafakizicelo eSirracuse bavame ukusebenzisa kwezinye iilunivesithi ezizimeleyo ezikumNtla-ntshona nakumazwe aphakathi kwe-Atlantic. IYunivesithi yaseBoston, iYunivesithi yaseMelika , iYunivesithi yaseRochester , neYunivesithi yaseCarnegie Mellon nayo yonke into ekhethiweyo.
Ukuba ukhangele indawo engakumbi yokufunda kwindawo yase-Upstate yaseNew York, qiniseka ukuba ukhangele i- Alfred University kunye ne- Ithaca College .
Ukhetho lwezikarhulumente, abafakizicelo baseSyrafu bahlala benomdla kwi- Penn State , kwiYunivesithi eBuffalo , naseYunivesithi yaseStony Brook .
> Imithombo Yedatha: Igrafu yothando ngeCappex; zonke ezinye iinkcukacha ezivela kwiSizwe sikaZwelonke seZiko leMfundo
IYunivesithi yaseHawaii kuManoa GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Colorado College GPA, SAT kunye ne-ACT Data
I-LIU eBrooklyn GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Fairfield University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Roanoke College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yaseDelaware GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yeScranton GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Olin i-College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Oklahoma State GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Umthandazo weNkquthela yoKhuseleko lweNtsapho
Umxhasi weMidiya oMaphakathi yiCandelo loKhuselo
AmaPhondo kunye neendawo zeCanada zijoyina i-Confederation?
Ukubaluleka kweeRadio Trailers
I-Dinosaur Footprint Umfanekiso
Iifayile zokusebenzela zeMathematika zoLwazi lweeMahla
Isingeniso kwisikolo saseFrankfurt
Imithetho yeGalofu - Umgaqo 17: I-Flagstick
Indlela yokuTyikitya kwesihloko kwisiGesi esisetyenzisiweyo
Ziyintoni iDynamics Dynamics?
Iyiphi Impembelelo Ngaba iiNtshontsho ZamaKhosi Zenzeke kuMbindi Mpuma?
I-Texas Hold'em I-Poker Odds Sheet Sheet
Uluhlu lweZikolo zoLuntu ze-Free Online kwi-Arkansas Students, K-12
Yintoni eyahlukileyo phakathi kweZoo kunye neNgcweliso?
I-Whitney Houston Ubomi kunye neProfayili